MUQDISHO, Soomaaliya - Wakiilka gaarka ah ee Qaramadda Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee Micheal Keating ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in mudada xileedkiisa xafiiska UN-ka ee dalka uu yahay gabaabsi, islamarkaana uu dhowaan xilka wareejino.
Warar soo baxaya ayaa xaqiijinaya in Keating lagu bedalay Nicholas Haysom, oo kasoo jeeda South Africa ah, balse haysta, islamarkaana Qaramadda Midoobay wakiil uga soo noqday dalal ay Suudaanta Koonfureed kamid tahay.
Mudada xileedka Keating ee dalka ayaa ku eg bisha dambe ee November, isaga oo carabka ku dhuftay in ka qaybgalkiisa shirka Kismaayo uga socday madaxda maamul goboleedyadda uu yahay mid uu ku mac-salaamaynayo hogaamiyaasha siyaasadda dalka.
Madaxda dowlad Federaalka ah ee Soomaaliya ayuu shaaca ka qaaday Keating inay aad uga war-qabaan ka qaybgalkiisa shirkaan xasaasiga ah, kaasoo furitaanka lagu weeraray, inkasta oo uusan soo hadal-qaadin hadii uu ka haysto ogolaansho buuxda.
"Caadiyan shirarka noocaan ah kama soo qayb-geli jirin, laakiin kani waa mid Sagootin, sababtoo ah inaan xilka banaanayo dhowaan," ayuu Keating ku sheegay wareysi uu siiyay Telafishinka ku hadla afka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland.
Shirka Kismaayo uga socda madaxda maamul goboleedyadda Soomaaliya ayaa waxaa uu yahay kii saddexaad, waxaana la filayaa in laga soo saaro War-murtiyeed ay ku cad-yihiin dhamaan qodobadda ay isku raaceen madaxda inta uu kulanku socday.
Villa Somalia ayaa isha ku haysa dhaq-dhaqaaqa Shirka magaalada Kismaayo, oo la sheegay...
Caalamka 31.05.2018. 19:33
Safiir cusub oo Ingiriiska usoo diray Muqdisho oo lagu qaabiley Villa Somalia
War Saxaafaded 03.03.2019. 16:07